Home Wararka (Deg Deg) Maxaa lagu gorfeeyay kulankii qado ee RW Kheyre iyo Gud....
Kulan qado ah oo ay wada qaateen RW Kheyre, Gud. Maxamed Mursal iyo labadiisa ku xigeen Muudeey & Mahad Cawad ayaa lagu go’aamiyay in uu la qabto mooshiinka ay xildhibaanada ka keenayaan MW Farmaajo.
Abaarihii afartii iyo barka wakhtiga magaalada Muqdisho aya waxaa guriga Gud. Mursal ka tagay RW Kheyre, waxaana saacad kaddib uu guddoonka Baarlabaanka qabtay mooshinka kalsooni kala noqoshada ee MW Farmaajo iyadoo ay xildhibaanada ku eedeynayaan MW Farmaajo eedeymo culus oo ay ka mid tahay Qiyaano Qaran, iyo dhiibistii Cabdikarin Muuse Qalbi Dhagax.
Waxa xildhibaanada ku noqotay la yaab in uu RW Kheyre uu hormuud ka noqdo mooshin ka dhan ah MW Farmaajo oo waliba lagu eedeynayo dhiibistii Qalbi dhagax oo la wada ogyahay in uu ka danbeeyay RW Kheyre, oo golahiisa wasiirada ay ku soo saareen qaraar in Qalbi dhagax xiriir la leeyahay Shabaab ururka uu ka tirsan yahay ee ONLF ay yihiin urur argagixiso
Qiimee Muqdisho Online
Previous articleRW Kheyre oo maanta ka baaqday xafladii la dagaalanka musuq-maasuqa. Maxuu ka baqay?
Next articleTaariikh: MW Farmaajo oo noqday MW ugu horeeyay oo mooshin baarlamaanka ka qabto
Digniin iyo Baraarujin ku socota SHACBIGA, MUCAARIDKA iyo MADAXDA Somaliyeed.